Ngamnye wethu unemfihlelo. Kwaye akunandaba nantoni na ezi zifihlakeleyo, nokuba zihlekisayo okanye zingalindelekanga, zikhohlakeleyo okanye zinzulu - kusekhona into eyimfihlelo, efihliweyo emva kweengcango ezisixhenxe. Ungabelana nabo nomhlobo osondeleyo okanye umntu othandekayo. Kodwa akuzona zonke iimfihlelo ezinokunikezelwa, kuba zonke iintombazana zinemfihlo yezesondo zesini.
Ngubani owayephambi kwakho, ayibala
Abameli bezesondo ezinamandla zivame ukutshatyalaliswa yinyaniso yokuba abanandaba ngabo bangaphi amadoda akhethiweyo phambi kwakhe babengamadoda, bahlala bhedeni kunye nantoni na imidlalo abelana nayo. Kodwa nangona kunjalo, ihlabathi lizaliswe nje ngemimiselo yendlela eye yabhujiswa ngayo ngumona kwixesha elidlulileyo. Ngokuqinisekileyo, othembekileyo wakho akayi kuhamba naye kwaye akayi kuba nomdla kuwe, ngubani umlobi wendlela yakho eqinile yokusilalisa umzimba, kodwa kuyafaneleka ukuzama? Indoda inolwazi olwaneleyo ukuba phambi kwayo ubenamaqhawe, nangona le nto ayinakwenzeka ukuba ibone iqela elikulolu hlobo. Ngelizwi, imfihlelo yesini yecala yexesha elidlulileyo (xa, njani, ngaphantsi kweziphi iimeko, ulahlekelwe yintombi yakho, unomdla onjani kubomi bakho obusondeleyo kunye nomntu owayesithanda ngaphambili?) Amantombazana azama ukushiya ubudlelwane obutsha kwaye kaninzi ukuba ngaba phambili ukuze ikhule ibe yinto enzulu.
Ndiza kuhlala ndihlala kunye nawe
Kwaye kukho ukungathembeki kwabasetyhini okanye iziganeko zokuphunyezwa kwazo, ngokusekelwe kwiinkhathi zobomi, kungekhona. Ngendlela, ukuzidumisa ngenxa yezinto eziye ngaphaya kwemida yokuziphatha, ibhinqa aliyi kuba. Ehlabathini kukho ezinye izilingo zesini, ezingalonakalisi ubudlelwane kuzo zonke. Le mihla yamabhinqa iyamkeleka imilinganiselo ebonakalayo ebantwini, kodwa ayikwazi ukufumana indawo enhle kwimibono yokuziphatha kwamalungu amaninzi ezesondo ezinamandla. Banokubangela ukuba inani elithile lamadoda likhutshwe. Inyaniso enomdla kukuba ukuba ngokwe-statistics, i-70% yesini esilungileyo esitshatileyo, esenza isisu, kunye nokuphila kwabo ngokwesini kunye neqabane zabo, ziphezulu kakhulu. Kwaye kwimeko yesithathu yamacala loo mntu uhlala engazi.
Kwakhona, izifihla zesondo ezichaphazela ukungabikho komntu osondeleyo, ziquka ukutyelela kwiindawo ezinobuncwane phantsi kophawu lwe "mfihlelo ephezulu." Ngombuzo ocacileyo olahlekileyo apha, amaninzi amaninzi athambe ukunika impendulo ngokukhawuleza kodwa eqinileyo kwisicwangciso: "Awuyiyo yonwabile ngesondo!". Le nto inamandla kakhulu kumntu ongento yanto. Kwaye enye imfihlelo enkulu, indoda ayifuni ukuba yayazi ukuba ngubani ovela kwiinkwenkwezi ze-movie okanye abasebenzisana nabo ngumnye wabalinganiswa abakhulu beengcamango zakho zesondo. Le mileko yeengcamango ayinakuze iphendule indoda.
Ngaphambi kwexesha lokuthabatha phambi kwethu umfanekiso wesibuthakathaka kwaye ongenakukwazi ukucinga ngokwaneleyo umntu ongaboni ukuba ulwazi oluqhelekileyo alunakulungele. Ewe ngokwenene uye wagqiba ekubeni udibanise nayo i-destiny kwaye nonke ngenxa yokuba kumzuzu onzima ukufuna uncedo kulabo abakukhansela kuwo, kwinqanaba lezinto zonke, ukuba ugcine umfihlelo ngokuzimeleyo. Nangona kunjalo, bafazi, befihla imfihlelo yabo yesondo, yenze intuitively. Kungenxa yesi sizathu indoda ayinakukwazi malunga noko ayifuni ukuyenza. Umoya wesithandathu ukhokela loo mfazi kwaye uyazigqiba ngoluphi uhlobo ukubonisa ulwazi oluyimfuneko kumntu. Kodwa kukho neemfihlelo ezimele zihlale ziyimfihlo. Ngendlela, malunga nale mfihlelo apho amadoda aqhelekanga afuna ukwazi nantoni na ukuba azi. Ngokuqhelekileyo badibaniswa nelokuba umfazi akanakuthanda nantoni na ngesondo kwaye oku kwaziwa ngabahlobo abasondeleyo (mhlawumbi omnye okanye umama wakho, isazi sezengqondo) okanye emehlweni omntu wesini, umfazi uqala ukucinga ngokulala naye. Apha ungaphinda ubhekise kwiimbali eziqhubekayo zomntu owayekade ehamba naye kunye nomntu olala naye kunye naye (ngakumbi ukuba wayenomdla). Kwaye imfihlo enkulu yokugqibela kukuvavanya isithunzi sesini somntu. Abasetyhini abaninzi abasoloko bethetha inyaniso, besaba ukucasula indoda okanye bafuna ukuphakamisa ukuzithemba kwakhe.
Ice Age kwisitya esinye
UAnastasia Volochkova uyaqhayisa ngeengubo zangaphantsi, umfanekiso
Indlela yokukrazula iimvakalelo ezimbi: umsindo, intukuthelo, umona
Ukulawulwa kweQumrhu ngeNkqubo yePilates
Ukugqithisa: ubuchule, ukucoceka, ukuchaswa, ukubonisa
Umyalezo: ukutya kunye nohlobo lwegazi
I-Sauce esuka kwi-yoghurt kunye nekhukhamba
I-charm yobuKristu: igqoke umtshato kunye nomva ovulekile
Izibonelelo zamanzi emzimbeni womntu
Uncedo lokuqala lobutyhefu ngamakhowe
Luhlobo luni lwemidlalo abantwana abathanda ukudlala ngonyaka owodwa?